Duqa Cusub ee Garoowe oo xilka kala wareegay Duqii hore (Dhagayso). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Duqa Cusub ee Garoowe oo xilka kala wareegay Duqii hore (Dhagayso).
Duqa Cusub ee Garoowe oo xilka kala wareegay Duqii hore (Dhagayso).
April 18, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garowe:- Duqii hore ee Garowe Xasan Maxamed Ciise (Goodir) ayaa xilka degmada kuwareejiyey duqa cusub ee sida kumeelgaarka ah uu Madaxweynaha Puntland u magacabay Axmed Maxamed Ducaale (Ayax) munsabada xil wareejinta oo ka dhacday xarunta Gobolka Nugaal waxaa kasoo qaybgalay wasiiro,xildhibaan ,Isimada dhaqanka, Ganacsato, Haween, hogaamiyayaasha xaafadaha Magaalada iyo marti sharaf kale.
Xasan Maxamed Ciise duqii hore ayaa uGu horeyn jeediyey wixii u qabsoomay mudadii labada sano iyo todobada bilood ahayd ee uu xafiiska joogay,caqabadihii,qorshayaasha cusub,halka ay gaartay xiriirka dibada.
Halkaan ka dhagayso khudbada duqii hore Xasan Goodir.
Duqa Cusub Axmed Maxamed Ducaalle (Ayax) ayaa isna sheegay in halka ay shaqadu marayso uu kasii anbaqaadi doono ,waxaana uu bulshada ka codsaday in laga shaqeeyo sidii uu u gudan lahaa waajibka masuuliyadda degmada Garoowe ee saran.